मलाई नै नसोधि अन्तिम समयमा फिल्मबाट निकालिदिन्थे, मैले अखबारबाट थाहा पाउँथे: सुष्मिता सेन – Jagaran Nepal
मलाई नै नसोधि अन्तिम समयमा फिल्मबाट निकालिदिन्थे, मैले अखबारबाट थाहा पाउँथे: सुष्मिता सेन
मुम्बई । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री सुष्मिता सेन १० वर्षपछि फेरी अभिनयमा फर्किएकी छन् । उनको वेब सिरिज ‘आर्या’ जुन १९ मा डिज्नी प्लस हटस्टारमा रिलिज भएको छ । जसबाट उनको धेरै प्रसंसा भइरहेको छ ।
उनले आफ्नो अभिनय यात्राको बारेमा एक वेब साइडमा कुराकानी गरेकी छन् । फिल्मबाट १० वर्ष टाढा रहनुको कारण के थियो ? सबै भन्दा ठूलो कुरा म आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्छु । १० वर्षसम्म म फिल्मबाट टाढा रहेपनि दर्शकको मायाको कारण मैले फेरी काम गर्ने निश्चित थियो । म फिल्मबाट टाढा रहनुको कारण मैले राम्रो स्क्रिप्ट नै पाएको थिइन । यतिको समयसम्म कसैको स्क्रिप्टले पनि मेरो मन छोएको थिएन ।
मलाई कुनै पनि भूमिका मन परेन । मैले लामो समयदेखि एक विशेष भूमिकाको पर्खाइमा थिएँ । ‘आर्या’का निर्देशक राम वाधवानीले मलाई कहानी सनाए जुन मलाई निकै मन परये अनि काम सुरु गरे । आर्या नै छान्नुको कारण के थियो ? आर्यामा मेरो भूमिका निकै सफल महिलाको रुपमा छ । एक प्यारी दक्ष होम मेकरदेखि डन बन्नेसम्मको यात्रा छ ।
जसमा एक विशेष भूमिका निभाएको छु । सिरिजको रिलज अगाडी नै ५ सिररिज लेखिसकेको छ । कहिले फिल्मबाट निकालिनु भएको छ ? मैले यस्ता धेरै फिल्महरु देखेको छु । जसबाट मलाई अन्तिम समयमा निकाएको छ । जसमा मलाई केही सोधेकै हुदैन । मैले त्यस्ता फिल्मको संख्या नै बिर्सिसकेको छु । मलाई न नसोधि फिल्मबाट निकालिदिन्थे जसको खबर मैले अखबारमा पाउँथे ।
जतिबैला मैले पूर्ण रुपमा प्रचारप्रसार गरिसकेको हुन्थे । तर यो फिल्म मेरो भाग्यमा नै थिएन धनेर मन बुझाउँथे । सबै आत्मबल बलियो बनाउने । आफैले आफैलाई सम्झाउथे ।